Mitady Olom-Pirenena i Liberland, Firenena Bitika Vaovao Indrindra ao Balkan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2015 9:30 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Български, 日本語, English
Ny saina “ofisialy” ny Repoblikan'i Liberland. Norafetin'i Vít Jedlička, nampiasaina noho ny lisansa Creative Commons.
Ny tantara farany malaza ao amin'ny tambajotra sosialy Eoropeana Atsinanana izao dia ny momba ilay firenena vaovao indrindra ao Eoropa, ny Repoblikan'i Liberland. Ilay firenena menavava, mbola mila fankatoavan'ny firenenkafa na ny fiarahamonina iraisampirenena, dia miorina eo amin'ny zorontany mirefy 7 kilometatra toradroa manamorona an'i Danube [renirano] anelanelan'i Croatia sy Serbia izay mbola mitotra ho “tany tsy misy olona [lalàna]” ary ao anatin'ny sisintany lehibe ifandroritan'ny firenena roa tonta hatramin'ny 1947.
Rehefa niantsona voalohany tao amin'ny tambajotra sosialin'i Balkans ny vaovao tamin'ny 14 Avrily 2015, dia maro no nihevitra azy ho fetin'ny lainga tratra aoriana. Liberland, anefa, amin'izao fotoana izao dia efa raisina matotra kokoa rehefa nanamafy sy namoaka indray ny fanambarana ny loharanom-baovao azo itokisana tahaka ny sampam-baovao mahaleotena Beta avy ao Serbia.
Tsikaritra ho manam-pikasana tanteraka ny ho fanjakana ofisialy ity [micronation] firenena bitika (aza afangaro amin'ny microstate [fanjakana bitika] nipongatra farany indrindra ao Eoropa ity. Ny filohan'i Liberland, olom-pirenena Tseky mitondra ny anarana Vit Jedlicka, dia nanambara tao amin'ny pejy Facebook-n'i Liberland ny ampitson'ny nanaovana fanambarana fa efa mihoatra ny 1000 sahady ny olona mangataka ny hizaka ny zom-pirenena. Jedlicka dia manana ny diplaoman'ny Siansa Politika avy ao amin'ny CEVRO Institute ary efa nanoratra betsaka an-tserasera momba ireo lohahevitra ara-politika, toekarena ary sosialy eoropeana. Efa manana ny lazany ihany koa ny pejy Facebook “ofisialy”-n'i Liberland, raha nahazo tia efa ho 17000 sahady talohan'ny tapaky ny volana Avrily 2015 ary mbola misonga haingana dia haingana izany.
Efa mihoatra ny 6000 androany ny fisoratana anarana azon'i Liberland ary 1000 ny fangatahana hizaka feno ny mahaolom-pirenena
Raha mbola misy ny sasantsasny mino fa kivazivazy ity resaka Liberland ity na fikendrena hanintonana ireo olana atrehin'i Eoropa, dia efa maro ankehitriny no miady hevitra amin'ny herijikan'ity firenena bitika ity ho firenena bitika fahatelo lehibe indrindra manerantany sy ho firenena ofisialy. Noho ny fahitana ny zaratany ho terra nulius [tany tsy misy tompony] ara-javamisy sy ny fananan'i Liberland ireo singa rehetra ahafahany mijoro ho fanjakana, dia mety ho sahirana ihany ny firenena manodidina sy ny fiarahamonina iraisampirenena hanazava ny antom-pandavana tsy hankatoa ny fijoroany.
Ankoatra izany adihevitra izany ihany koa ny fipongaran'ny fanontaniana hafa raha tokony hofafana ao amin'ny tranonkalam-pampahalalana lehibe indrindra manerantany ao amin'ny Wikipedia i Liberland na tsia. Raha roa monja ny tonian'ny Wikipedia mitaky ny hanesorana ny lahatsoratra, milaza ny lahatsoratra ho “nofinofy hafa hanangana firenena”, dia maro ireo tonia sy mpaneho hevitra no nilaza fa tokony hotazonina ny lahatsoratra, na noho ny mahatantara azo ekena mila torohay momba azy na noho ny antony ananany herijika manify hahalasa azy ho firenena eoropeana.
Manazava ny tonian'ny Wikipedia iray:
Tahaka ny misy dikany izy ity rehefa hita fa toerana tsy misy tompony vokatry ny adin-tsisintany. Ny hetsika rehetra atao amin'ity firenena tsy nisy nankatoa ity dia tahaka ny misy fiantraikany amin'ny [firenena] mitaky azy ho tompony, ka ho lany tanteraka izy ity raha dinihana ao anatin'ny fotoana maharitra.
Ny sasany amin'ireo mpanorina ny Liberland, teo ampananganana ny sainan'ny firenena teo anelanelan'ny sisintanin'i Croatia sy Serbia. Sary avy amin'ny famoahana an-gazety ofisialin'ny Liberland.org.
Araka ny voalazan'ny tranonkalan'i Liberland sy ny iditra ao amin'ny Wikipedia, ny fiteny ofisialin'ny firenena dia Tseky, Hongroà ary Serbo-Kroaty, ary ny fangitra ara-jeografikan'ny firenena dia 45°46'N 18°52'E. Raiso naoty izany fa mety ho adinina amin'ny jeografia rahatrizay.
Tsotra ny fangatahana zom-pirenena fa dia mandefa imailaka ny sary tapaka natao “scan”, taratasy fangatahana ny antony itadiavanao hizaka ny zom-pirenen'i Repoblikan'i Liberland, ary laharana telefonina, raha mety. Misy ihany na izany aza ny voarara ao amin'ny fangatahaka zom-pirenena, araka ny hita ao amin'ny tranonkala ofisialy sy nambaran'ny filohan'i Liberland tenany fa tsy liana amin'ireo mihevi-tena ho neo-Nazi, komonista, na extremista ry zareo. Hotsipahina avy hatrany ihany koa ny fangatahana zom-pirenen'ireo voampanga amin'ny “heloka bevava” isankarazany.
Ity mety ho firenena fahatelo kely indrindra ao Eoropa ity, aorian'i Vatikana sy Monaco, ity dia mampanantena fa ho ambany na tsy hisy ny hetra aloan'ny olom-pireneny (jereo ny “paradisan-ketra” raha te-hijery torohay hafa) sy ho firenen'ny olom-pirenena:
manome haja ny vahoaka hafa sy manaja ny hevitry ny hafa, tsy ijerena ny volonkoditra, fiaviana, fironana na fivavahana
manome haja ny fananan'olona manokana izay tsy azo kitikitihina
Mety hampangatsiatsiaka an'i Eoropa ireo rehetra ireo. Mandritra izany fotoana izany, na ho ankatoavina na tsia amin'ny fomba ofisialy ny firenena, dia nametraka fanontaniana mivoitra eo amin'ny resaka zon'olombelona, sata ara-toekarena, fiakaran'ny extremisma ary ny kolikoly any amin'ny firenena hafa ao Eoropa i Liberland.
Maro ireo olona avy amin'ny vazantany efatra no maneho hevitra ao amin'ny pejin'ny media sosialin'i Liberland ho fanohanana ny sata ijoroany — fahalalaham-pitenenana, tsena malalaka, fanafoanana ny endrika rehetran'ny extremisma sy ny fanavakavahana. Matetika asongadin'ny mpiserasera fa ireo no lohahevitra mety hiteraka olana haingana indrindra any amin'ny firenena eoropeana sasantsasany. Hahita ny lalana mankany amin'ny fampanjakana ny lalàna ve i Eoropa sa firenena iray vaovao no hametraka fenitra vaovao hoan'ilay kaontinanta nijoro ela?